Ukuphupha uKellner Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Kuthekani ngesimboli yamaphupha omncedisi? Kutheni le nto sizifumana sisebenza ngokugaya izonka kunye nezitya zotywala kwaye singenaxesha lokuphefumla phakathi kokunceda zonke iindwendwe?
Nabani na otyibilika kwindima yomncedisi ephupheni, onomxholo wokuvuka kobomi kunokwenzeka ukuba ulungiselela abantu. Kodwa lumka: uphawu lwephupha ngamanye amaxesha luyakunyusa ukuba uzibuze ukuba asenzi kakuhle kakhulu ngeenkonzo zethu kwaye ke siyazilibala.
1 Uphawu lwephupha «umncedisi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iweta» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «umncedisi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «umncedisi» - ukutolikwa ngokubanzi
Xa siphupha, sihlala singena kwiindima ezingenanto yakwenza nobuntu bethu bokwenyani. Umzekelo, kunokwenzeka ukuba ephupheni sidibana nabalungiseleli kwaye sihamba kwindawo yokutyela ephethe itreyi yokuhambisa ukutya okuceliweyo kwiindwendwe. Kwitoliki ngokubanzi yamaphupha, la mava ephupha anokubonisa ukuba omnye sele eza kuba ngenxa yeempembelelo zangaphandle. Ukwanela ukwaphulukana. Nokuba ngumncedisi okanye uweta ephupheni kunokuthetha ukuba kungekudala kuya kufuneka uxhomekeke kuncedo lwabahlobo.
Ukuba ubona wobuweyitara emaphupheni akho, ke, ngokoluvo ngokubanzi, unokuyitolika ngokuqinisekileyo le nto kwaye ugxile kwenye ikamva elimnandi ndijonge phambili. Ukuba umncedisi usiphakela ngetawuli ephambi kwengalo yakhe, oku kunokubonisa ukonwaba kwakhe. Kungenzeka ukuba iphupha linokuhanjiswa kubomi bokwenyani. Kwindoda ephuphayo a unxibelelwano ngokwesondo qulathe. Unokukhetha ukukhonzwa apha, uwedwa ngokwakho ngokweminqweno neemfuno zakho.
Ngapha koko, umfanekiso wephupha "umlungiseleli" umele ukungaqiniseki kunye nokuzithoba ekuchazeni iphupha. Ukuphupha kufanelekile ngakumbi kukuqinisa eyakho Ukuzithemba umsebenzi. Ukongeza, iphupha lomncedisi linokuphakamisa umbuzo wokuba ungaziva phi ebomini bakho kwaye uhlala unceda abanye kwaye uzimisele ukuqhubeka nokwenza njalo.
Uphawu lwephupha «iweta» - ukutolikwa kwengqondo
Umlungiseleli, oya kuthi ephupheni kwaye asinike izitya ezahlukeneyo okanye iziselo, angabonisa ngokwembono yengqondo ukuba Iirati y inkxaso Imfuneko ebomini bokuvuka. Mhlawumbi ixesha elide siziva ngathi asixabisekanga ngokwaneleyo kwizinto esihlala sizenzela abanye. Ukukhonzwa yiweyitara kunokubonisa ukuba mkhulu kangakanani umnqweno wephupha lokuncanciswa nokukhathalelwa ngabanye.
Uku-odola nomncedisi kukwafumaneka Umonde. Ngaba ikhona ingxaki ebomini bakho efuna umonde? Emva koko kuya kufuneka usebenzele ekwandiseni, kuba le kuphela kwendlela yokufezekisa le nto uyifunayo.
Ukukhonza abanye abantu ephupheni kubonisa ukuba ukuphupha kunesakhono sokukhathalela abanye abantu kwaye uqaphele xa uncedo lwabo lufuneka. Nangona kunjalo, uhlala ufumana kunzima ukuyibona imida yakho kwaye ungazincami ukuya kwinqanaba lokuncama.
Uphawu lwephupha «umncedisi» - ukutolika kokomoya
Kwimeko yokomoya, uphawu lwephupha "iweta" lifuna ukuba iphupha kwelinye icala Umonde phakathi. Kwelinye icala, iphupha lifuna ukuba yena Bekwaukunceda nokunceda abanye.